Saylac (; ) waa magaalo xeebeed taariikhi ah oo ku taala Gobolka Awdal waqooyiga dalka Soomaaliya. Magaalada waxay ku taalaa waqooyi-bari Gobolka Awdal, waxayna aad ugu dhowdahay wadanka Jabuuti oo u jirto ilaa 120 km. Magaalada Seylac oo ah mid qadiimi ah oo aad u taariikh dheer ayaa wakhti xaadirkan magaalo-madax u ah gobolka Selel oo ah gobol cusub ooy magacaabtey dowlada Somaliland. Seylac waxaa loo aqoonsan yahay ineey jirtey tan iyo wakhti ka horeeysay soo bixitaanka diinta Islaamka, midaasi oo ah goobaha ugu taariikhda dheer qaarada Afrika, iyada oo ay ku yaalaan meelo fara badan oo taariikhi ah hase yeeshee ka turjumaaya taariikhda geeska Afrika gaar ahaan tan Soomaalida. Waxa laga soo xigtey sahamiyayaal Roman iyo Giriig ah in qarnigii 1aad Sey|lac dhisneyd isla markaana lahayd maamul caasimadeed iyo hogaan heer sare ah. Tan iyo horaantii soo bixitaanka diinta Islaamka magaalada Seylac waxay ahayd hooy waxbarasho, ganacsi, dhaqan, ilbaxnimo, xadaarad iyo maamul boqortooyo. Qiyaastii qarnigii 7aad ilaa 8aad ayaa diinta Islaamku ku soo fidey magaalada Seylac oo wakhti kooban ku noqotay hooyga diinta ee guud ahaan qaarada Afrika, gaar ahaan gobolka geeska Afrika.
Nelson Rolihlahla Mandela (Carabiga.روليهلالا 'نيلسون' مانديلا) waa madaxwaynihii hore ee Koonfur Afrika. waxaa uu ahaa halgamaa waxa uu si balaadhan ugasoo horjeestay nidaamkii midab kala sooca ahaa ee kajiray konfur afrika, qabiiladiisu waxa ay u bixiyiin naanaysta ah madiba oo uu macneheedu yahay qofkii aadka u akhlaaqda badnaa, mandeelaa waxaa lasheegaa in uu si wayn ujeclaa mmahatama gandi wax yaaba farabadan ayaanay isaga midyihiin oo ku saabsan xaga falsafada iyo wadani nimada xornimada. Mandeela wuxuu dhashay sanadkii 1918 18 juli waxa uu ku dhashay mandaqada taranskay ee konfur afrika. Aabihii waxa uu ahaa madaxa qabiilada tinbo ee caanka ah, aabihiina waxa uu dhintay isaga oo aad uyar.kadib waxaa loo diyaariyay sidii loogu dooranlahaa booskii aabihii, kadib waxa uu waxbaradsho kabilaabay dugsi kuyaala gudaha gobalkiisa sanadii.1930 kadib waxa uu ku biiray jamacada harfort.laakin waxa uu kabaxay sanadii 1940 isaga iyo saxibkiisioi qaaliga ahaa ee.olafiyer tanbo.kabixitaankaa jaamacada waxa ay kadanbaysay kadib markii.lagu eedeeyay in ay ka qaybgaleen mudaharaad arday madawahaa ay samaysay.waxa la ogayahay in mandeela uu soomaray xili ardaynimo oo aad u adag.
Last edited on 2 Jannaayo 2017, at 11:55